Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Paul Pogba Oo Bur-burin Kara Heshiiska Man United, Harry Kane Oo Dalab Ka Helaya Man City Iyo Qodob Kale
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga: Paul Pogba oo bur-burin kara Heshiiska Man United, Harry Kane oo dalab ka helaya Man City iyo Qodob kale
June 20, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Miralem Pjanic ayaa wadahadalo kula jira Juventus si uu ugu laabto kooxda – sida laga soo xigtay Corriere Dello Sport .
Barcelona ayaa u aqoonsatay weeraryahanka Eintracht Frankfurt Andre Silva bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida ay ku warameyso AS .
Real Madrid ayaa dooneysa inay keento xidiga Sevilla ee Jules Jounde si ay ugu buuxiso booska Sergio Ramos – sida ay qortay Marca .
Manchester United oo qorsheyneysa inay dalab rasmi ah ka gudbiso daafaca Villarreal Pau Torres isbuucyada soo socda – sida laga soo xigtay AS .
Manchester City ayaa qarka u saaran inay heshiis qaadasho ama mi ka tagis ah u fidiso Tottenham oo ku dooneysa Harry Kane adduun dhan 100 milyan oo euro oo u dhiganta 138 milyan oo doolar, halkii The Star .
Carlo Ancelotti ayaa qarka u saaran inuu lasoo saxiixdo weeraryahan ka tirsan Everton oo qayb ka ah qorshaha kharashka uu Real Madrid, iyadoo £ 50 million ($ 69m) inay u dhaqaaqdo Dominic Calvert-Lewin on kaararka, halkii The Sun .
Manchester United ayaa ka cabsi qabta in Paul Pogba uu qarka u saaran yahay inuu burburiyo qandaraaskiisa Old Trafford isla markaana uu uga tago kooxda si xor ah wakiil, sida ay qortay The Mirror .
Tababaraha Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa rajeynaya inuu Raphael Guerreiro kasoo qaato Borussia Dortmund, sida ay qortay jariirada Bild .
Juventus ayaa diyaarineysa qorshe rasmi ah oo ay kula soo wareegeyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sassuolo Manuel Locatelli kaasoo ka dhigi doona inay bixiyaan 30 milyan oo ginni (m 26m / $ 36m) iyo Radu Dragusin, sida ay ogaatay shabakadda Goal .
Aaron Ramsey ayaa ka fikiraya raadinta shaqaalaynta Barcelona, ​​sida ay qortay El Gol Digital.
Achraf Hakimi wuxuu dareemayaa “hoos u dhac” kooxda Paris Saint-Germain, taasoo u ogolaatay Chelsea inay hogaanka u qabato loolanka loogu jiro xaqiijinta saxiixa daafaca Inter oo in badan la raadinayay. CaughtOffside
Jesse Lingard ayaa doonaya inuu si joogta ah ugu biiro West Ham, sida ay qortay Football Insider.
Manchester United ayaa dalab fiican ka gudbisay xiddiga kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho. Sky Sports ayaa ku warameysa in kooxda Premier League ka dhisan ay u soo bandhigtay in ka badan 75 milyan ginni wadar ahaan isaga. Sky Sports
Chelsea ayaa dooneysa inay u soo bandhigto Inter Ruben Loftus-Cheek qeyb ka mid ah heshiiska ay kula soo saxiixaneyso Achraf Hakimi. La Gazzetta dello Sport
Rui Patricio ayaa ogolaaday inuu ku biiro kooxda Roma sida uu sheegayo joornaalka Sky Sport qeybta Talyaaniga.